HowTo: Faka iPlasma 5.2 ku-ArchLinux / Antergos + Amathiphu | Kusuka kuLinux
Ya siyabakhombisa izindaba nokuthuthuka okusilethela iPlasma 5.2, futhi kulokhu ngizokukhombisa ukuthi ungayifaka kanjani futhi uyilungiselele kanjani le nguqulo entsha ye-KDE kusuka Antergos, kuphela ngohlelo lwesisekelo. Lokhu kusebenza ngokufanayo uma sifaka i-ArchLinux ekuqaleni, ngoba i-Antergos isebenzisa amakhosombe afanayo.
Okuboniswe ngezansi kufanele kwenziwe ngokuzibeka wena engcupheni. Asinacala lokulahleka kwedatha yakho noma izinhlekelele ezinjalo.
1 Ukufakwa kwe-Antergos
2 Ukufaka iPlasma 5.2
3 Amathiphu wabasebenzisi be-KDE 4.14.X
Inqubo yokufaka i-Antergos ilula impela, ifana kakhulu ne-Ubuntu futhi konke kwenziwa ngemidwebo. Umehluko kuphela ukuthi esinyathelweni lapho sikhetha khona i-Desktop Environment esiyithandayo, sizokhetha inketho Base, okungukuthi, ngeke sifake noma yiliphi ideski.
Sizokwenza ngale ndlela ngoba uma sikhetha i-KDE, izofaka uhlobo lwe-KDE 4.14.4 futhi akuwona umqondo.
Ukufaka iPlasma 5.2
Sicabanga ukuthi sesivele siyifakile i-Antergos futhi konke sesikulungele, siqhubeka nokufaka amaphakheji adingekayo ukuze sijabulele iPlasma 5.2. Uma nganoma yisiphi isizathu banezinkinga ngeNethiwekhi Ethernet (memo kimi) futhi basebenzisa i-DHCP, bangayisebenzisa ngomyalo:
Manje kufanele sigijime:
$ sudo pacman -S kdebase-dolphin kdemultimedia-kmix umoya-mpilo-gtk2 umoya-mpilo-gtk3 umoya-mpilo-kde4 umoya-kde4 kdegraphics-ksnapshot umphathi wenethiwekhi
Kungasicela ukuthi sikhiphe i-khelpcenter njengoba iphikisana. Siyikhipha ngaphandle kwenkinga
Lawa ngamaphakeji adingekayo kuyo yonke into eku-KDE ukuthi iboniswe kahle. Asikwazi ukukhohlwa eminye imininingwane:
Iphakethe le-meta xorg isivumela ukuthi sikhethe esifuna ukukufaka. Asinalo lonke ikhadi levidiyo elifanayo.
Kufanele sisebenzise i-NetworkManager ne-SDDM manje esengumphathi weseshini ye-KDE.
$ sudo systemctl vumela i-sddm.service $ sudo systemctl vumela i-NetworkManager
Singaqala kabusha manje 😀
Amathiphu wabasebenzisi be-KDE 4.14.X
Ngokufika kancane kancane kwamaphakeji wenguqulo elandelayo ye-KDE enguqulweni yamanje, amafayela wokumisa manje abanjwe ngokuhlukile njengoba ngichazile kokunye okuthunyelwe. Noma kwe-KDE4 izilungiselelo zomsebenzisi zizogcinwa ku- ~ / .kde4 /, kuzicelo ezintsha abazogcinwa kuzo ~ / .config / njengoba I-Arch Wiki.
Manje ngaphakathi ~ / .config kunefayela elibaluleke kakhulu elibiziwe kdeglobals engikushoyo ngenxa yalokhu okulandelayo: kwenzeka kimi ukuthi izicelo zithanda Kate o Konsole Abazange bathathe ifonti ebenginayo endaweni yohlelo lonke, ngakho-ke bekufanele ngiyibeke ngesandla. Kanjani? Kulula.
Uma kwenzeka lokhu kwenzeka kuwe, sivula ifayela bese sibheka isigaba esijwayelekile okufanele sibukeke kanjena noma kanjena:
[Okuvamile] I-ColourScheme = Igama Lomoya Oshisayo = Shreeze shadowSortColumn = iyiqiniso
Futhi-ke, kufanele babambele iTahoma no-Ubuntu Mono ngamafonti abawasebenzisela uhlelo. Akudingekile ukuqala kabusha i-PC noma ukuphuma kweseshini, simane sivale uhlelo lokusebenza ngenkinga futhi yilokho kuphela.
[... kuhlelwe njalo ...]
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » HowTo: Faka iPlasma 5.2 ku-ArchLinux / Antergos + Amathiphu
- Ingabe i-WiFi ingavunyelwa kusuka ekufakweni kwesisekelo? Ngale ndlela bekungeke kudingeke ukuxhuma ikhebula le-ethernet.
Okwamanje ngisebenzisa i-Archbang futhi ngithanda ukuhlola iPlasma 5, kuthiwani ngokuzinza? Ngiyabonga 🙂
Njengoba impande ifaka imenyu engu- # wifi futhi izovula isibonelo sokukhetha inethiwekhi bese ubeka ukudlula. Ngemuva kwalokho ungahlola ukuxhumana nge- # ping -c 3 http://www.google.com.ar futhi uzobona ukuthi ixhunyiwe noma cha. Ngikwenze lokhu kusuka kulokhu okuthunyelwe okuhle -> https://blog.desdelinux.net/guia-de-instalacion-de-arch-linux-2014/
UJose Jácome kusho
Lapho Ukuthuthukela ku-Plasma ku-Arch Kmix akuqali ekuqaleni, kufanele ngiqale ngesandla ... Ngabe kufanele ngiyifake futhi? Ngoba kuthreyi yeSistimu ayikho indlela yokwengeza iVolumu Control
Phendula uJosé Jácome
Ngihlola i-plasma 5 ku-OpenSUSE Tumbleweed, futhi i-kmix iqala ngaphandle kwenkinga kuthileyi, okungukuthi uma kuyi-kmix ne-kmix5 futhi kungenzeka ukuthi usebenzisa i-kmix.
Kuze kube manje, ayikanginiki ucingo. Idla inqama eningi, i-plasmashell iqala kuma-megabyte ayi-150 futhi isivele iya kuma-230 cishe imizuzu engamashumi amathathu yokusetshenziswa (konke lokhu, manje konke kugcina ngo- "Shell" 😀). Kukhona uketshezi okukhulu kokugqwayiza futhi izinhlelo zokusebenza zivuleka ngokushesha.
Into "embi" ukuthi angikwazi ukuthola ingqikithi ye-oxygen yomhlobisi wewindi, ngiyithandile leyo engenhla komoya.
Ngokwalokho engikubonile, uma zonke izinhlelo sezithunyelwe ku-qt5, i-plasma 5 izoba ngumlandeli ofanelekile wenguqulo 4.
Sawubona, lesi "isiphazamisi":
"Isizathu sesicelo: i-kmix-14.12.1-1 iyadingeka esikhundleni se-kmix-multimedia yokusebenza kahle kwe-kmix ngaphansi kwePlasma 5."
Ngokulandelayo, ngethemba ukuthi yizinsuku ezimbalwa kuphela, i-kdemultimedia-kmix izothathelwa indawo i- "Kmix". Ungafunda amazwana amaningi kusixhumanisi ...
Yebo, uma ingaphumi, ngiyayiqala ngesandla bese kuba yiyo 😀
Ngiyabonga @ hector, kuyiqiniso ukuthi ngine-kmix hhayi i-kmix5 ngoba kubukeka sengathi i-Oxygen uma ngiyiyiqala ngesandla… Futhi i- @ BD550 iphume kancane kwi-RAM Plasma Next, ngolunye usuku ngafika ku-Occupy 4200MB!
Esinye isisombululo esilula ukufaka i- "kmix-multimedia" Kokuncamelayo Kwesistimu -> Ukuqalisa nokucisha. Ukugijima ekuqaleni.
Ngikwenzile lokho 😀
Sawubona, kulabo abanezinkinga nge-sddm, mhlawumbe kungenxa yokuthi ayifakiwe.
Ifakwe nge-pacman -S sddm ne-voila.
Umbuzo engifake konke kuwo ubukeka ulungile kepha kulokhu engikubona kuyi-kde 4.14 nge-brezee inkinga ukuthi ayizisebenzisi izinguquko ekubukekeni ishintshe nephepha lodonga nakho konke kuhlala njengoba kwenzeka ngokuzenzakalela, okungukuthi, ne iphepha lodonga nezimpawu lapho kuvalwa iseshini kuzohlala futhi sengathi bekungokokuqala ungena ngemvume
Ngiyifake izolo e-Arch futhi yonke into icishe ibe ncane endaweni yayo. Ushintsho alukhathazi kangako kimi; empeleni ezinye izinkinga ebenginazo nge-KDE 4.14 zilungisiwe. Ngokudabukisayo, kunezithonjana ezithile zePlasma 5 (kwimenyu, iwijethi yamadivayisi asuswayo, noma ngisho ne-cashew) ebukeka inkulu futhi ama-plasmoid engekho kimi. Angazi ukuthi ngiyilungisa kanjani noma lapho ingxabano ingaba khona ,: S
Nginenkinga i-xD akuyona into enkulu kepha idelelekile haha, kufanele ngiqale mathupha i- "sddm" ngenketho ye- "qala" ngoba okuthi "vumela" kuthi "yehluleka okuvele kukhona": Ingabe uneziphakamiso zokuyixazulula? Futhi iyiphi "itimu" oyincomayo? Halala!
UHarry Marcano kusho
Sawubona shini-kire, kuzofanele ukhubaze leyo oyifakile futhi unike amandla i-sddm, ngokwesibonelo ukhubaza i-gdm "$ sudo systemctl khubaza i-gdm.service" bese unika amandla i-sddm "$ sudo systemctl vumela i-sddm.service" ne-voila, qala kabusha.
Phendula ku-harry marcano
Sawubona, nginombuzo njengamanje ngine-arch ene-kde 4 version ezinzile, kepha ngazisiwe ngakho-ke ukufaka i-plasma 5 .. nanku umbuzo wami wokuqala okufanele ngikhiphe kuqala bese ngifaka ini noma kanjani inqubo eqondile ? engingafuni ukuthi kususwe lutho emafayilini ami uqobo ... ngiyabonga kusengaphambili
sawubona jedr93, Susa le oyifakile "$ sudo pacman -Rc kdebase-workspace" bese ufaka iplasma "$ sudo pacman -S plasma-meta" ungaziqondisa ngewiki https://wiki.archlinux.org/index.php/Plasma
Kuhle, kepha ingabe isizinzile vele? Ngine-archlinux ene-kde 4.14.8 futhi ngingathanda ukufaka i-kde plasma 5.2 ngaphandle kwengozi.
Sawubona! Unjani ?
Siyabonga ngokwenza le mihlahlandlela! 😀
Uyazi ukuthi ngenze ukufakwa okuhlanzekile kwe-Arch futhi ngafaka konke okukhombisile kepha imvelo ayilayishi kahle, ngemuva kokungena ngemvume nokulayisha ibha ye-KDE kufana nokuthi ideskithophu ayilayishi kahle, nginemenyu eseceleni kuphela ye « izithombe - ividiyo - umculo »futhi angikwazi ukwenza lutho. Uyazi ukuthi kungaba yini?